Barnaamijyada shukaansi ee ugu fiican: maxay yihiin iyo faa iidooyinka midkasta leh | Ragga Stylish
Si aad ula kulanto qof qarniga XNUMX-aad, waa inaad ogaataa waxaad uga baahan tahay dalabka moobiilka. Maalmahan way adag tahay in lala kulmo qof haddii aysan ku dhicin noocyada codsiyada. Waxaa jira barnaamijyo badan oo kala duwan marka loo eego dhadhanka iyo habka la xiriira. Halkan waxaan kuugu sheegeynaa waxa apps shukaansi ugu fiican Hadana hadafkaagu yahay inaad raadsato lamaane ama xodxodasho, waxyaabo badan baa hagaagaya.
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa kuwa ugu fiican barnaamijyada shukaansi iyo maxay yihiin faa iidooyinka iyo qasaaraha ku jira isticmaalka mid kasta oo ka mid ah.
1 Raadi lamaane maanta
2 Barnaamijyada shukaansi ugu fiican
2.2 Barnaamijyada shukaansi ee ugu fiican: Lovoo
2.5 Barnaamijyada shukaansi ee ugufiican: Adoptauntio
Raadi lamaane maanta
Beryahan xoogaa waa ka dhib badan tahay shukaansiga maanta sidii hore. Waxaa jira sahay badan, laakiin sidoo kale baahi badan. Mawduuca warbaahinta bulshada ayaa ka dhigaya shukaansiga qof aad uga fudud sidii hore. Inkasta oo sida caadiga ah murugo, waa xaqiiqda jirkeenu waa baakadka alaabada aan iibino. Waxaa jira kuwa si fudud uga fudud inay ku xiriiraan barnaamijyadan sababtoo ah xaqiiqda haysashada muuqaal wanaagsan. Dad badan waxay ku yiraahdaan soo jiidashadooda jireed marka hore, laakiin markii aad barto qofka aad la joogtay, waxaad ogaan kartaa inaysan mudnayn in la sii wado barashadooda.
Nasiib darrose, wax walbaa ma aha wax jidheed. Qofka loo arko inuu yahay qof soo jiidasho leh, waa inuu ilaaliyaa dheelitirka muuqaalka maskaxda. Tani waa dib u dhac weyn marka ay timaado adeegsiga barnaamijyada shukaansi ee ugu wanaagsan. Ka soo Faa’iido maleh inaad ahaato kan ugu caqliga badan adduunka haddii aadan laheyn muuqaal soo jiidasho leh, iyo dhanka kale. Waxa jira dad badan oo u istaaga inay yeeshaan jidh aan caadi ahayn laakiin maskax ka tagta waxyaabo badan oo la doonayo. Sawirada lagu muujiyey astaamaha waxay muujinayaan qaybahaas aan dooneyno in nala arko. Sidaa darteed, maahan inaad si fiican ugu kalsoonaato sawir ilaa aad sifiican qofka uga garaneyso.
Qofku wuxuu qaadaa sawir muuqaal ah si uu ugu rakibo codsi waana hubaal inuu yahay mid ka mid ah sawirradii ugu fiicnaa ee la qaaday ka dib kumanaan sawirro ah oo fashilmay Marka ay timaado la kulanka qofkaas, waad garan kartaa, kaliya maahan inuusan ahayn sida uu sawirada ka eegay, laakiin shaqsiyaddiisa waxay ka tagaysaa waxyaabo badan oo la jeclaan lahaa. Dhamaadka, jirkeennu waa weel sii xumaanaya sannadihii la soo dhaafay waana maskaxda iyo shakhsiyadda u adeegi doonta sii wadida xiriirka.
Sababtoo ah baahida sii kordheysa ee loo qabo in lala kulmo dad cusub iyo dhammaan jinsiyadaha, qaar ka mid ah codsiyada shukaansiga ayaa la abuuray kuwaas oo isku dayaya inay ku biiraan dadka.
Barnaamijyadan moobiillada ah waxay leeyihiin ujeeddada ugu weyn ee ah inay kuu fududeyso inaad la kulanto qof kale oo aad xiriir la sameysato. Waxaad ka heli kartaa jacayl, xiriir fog-fog, ama istaag hal habeen ah. Aan aragno kuwa ugu fiican barnaamijyada shukaansi:
Waa mid ka mid ah barnaamijyadooda shukaansi ugu fiican iyo sidoo kale loo arkaa kan ugu kulul. Waa codsi wax ka beddelay habka loo helo lammaane. Wax ku oolnimadeedu waxay kaa caawineysaa inaad hesho lammaane aad ayey u sarreysaa, laakiin sidoo kale la kulanka dad cusub ama waxaa jiri lahaa kooxdaada asxaabta ah. Waxaad ka heli kartaa astaamo kala duwan dadka kale oo fiiri haddii aad jeceshahay. Waxa kale oo aad ka heli kartaa macluumaad ku saabsan dantooda Facebook-ga oo dammaanad ka qaadaya in kulanka qofkaas uu wanaagsanaado. Maalmahan waxaa loo isticmaalay hal habeen istaag marka loo eego raadinta lammaane.
Barnaamijyada shukaansi ee ugu fiican: Lovoo
Waa mid ka mid ah codsiyada ugu habboon ee lagula kulmo dadka ku nool deegaankaaga. Waad la sheekaysan kartaa iyaga, waad gudbin kartaa sawirro waadna la kulmi kartaa. Waxaad u baahan tahay oo keliya inaad iska diiwaangeliso Facebook-gaaga, emaylkaaga ama astaantaada twitter-ka oo aad bilowdo inaad adeegsato raadaarka si aad ula kulanto dadka ku dhow goobtaada. Radaarkaani wuxuu isku dayayaa inuu noqdo mid sax ah sida ugu macquulsan si ay ugu fududaato la kulanka iyo ku dhiirigelinta in la is barto.
Waa mid ka mid ah barnaamijyada shukaansi ugu wanaagsan mahadsanid sumcadda uu ku leeyahay xayaysiisyada telefishanka. Waa codsi dhammaan dadkaas doonaya oo doonaya jacaylka dhabta ah. Waxay ku shaqeysaa nidaam burburin waxayna isku dayeysaa inay la xiriirto dadkaas aaminsan jacaylka aragtida koowaad. Sidan ayaad kula xiriiri kartaa qofkaas adoo u maraya sheeko gaar ah, inkasta oo la bixiyo. Qofkaas oo runtii diiradda saaraya helitaanka jacaylkiisa, codsigan moobiilka ah ayaa mudan inuu bixiyo.
Waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan ee ka jira qaybtaan oo dhan. Dhamaan halyeeyaashii bilaabay adeegsiga codsigan waxay xasuustaan ​​inay ahaayeen bog internet. Waxay leedahay ku dhowaad 200 milyan oo isticmaale waxayna kuu oggolaaneysaa inaad la kulanto dad cusub iyo la sheekaysiga kuwa ay danaha wadaagaan. Waad la kulmi kartaa dadka hareerahaaga ah waxaadna ogaan kartaa dadka kale ee aad isku dhacdo jidka gurigaaga ama markaad khamri u baxdo. Codsigan wuxuu u adeegaa inuu ku ogeysiiyo kuna soo biiro. Adeegsigeedu wuu sii yaraanayay markii muddo la siiyay iyada oo la eegayo kobaca ballaadhan ee Tinder ku yeeshay, iyo kuwo kale.
Barnaamijyada shukaansi ee ugufiican: Adoptauntio
Tani waa mid ka mid ah codsiyada ugu xun tan iyo markii ay tahay haween awood u leh inay go'aan ka gaaraan ragga waxaana loola dhaqmayaa sidii wax soo saar. Dhaqdhaqaaqa dabeecadda haweenka ee raadinta sinnaanta jinsiga sidoo kale xuquuqda sida sinnaanta bulshada. Xaaladdan oo kale, ragga waxaa loo arkaa inay yihiin wax soo saar iyo haweenku waa kuwa go'aansada in ay la joogaan ama aysan la joogin ama aqbalaan in wada hadal fudud la yeesho. Waad kala shaandheyn kartaa raadintaada hashtags waxaadna u adeegsan kartaa geolocation si aad u hesho qofka aad raadineyso.
Waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu wanaagsan ee lagu shukaansado bulshada khaniisiinta ah. Waxaad heli kartaa adeeg dhul-bixin oo kuu oggolaanaya inaad la xiriirto isticmaaleyaasha kale oo aad la joogto. Waa tan ugu isticmaalka badan bulshada khaniisiinta oo dhan. Laakiin nooca bilaashka ah iyo nooca la bixiyay oo leh adeegyo badan oo badan.
Waxaan rajaynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto kuwaas oo ah kuwa ugu fiican barnaamijyada shukaansi iyo astaamahooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Barnaamijyada shukaansi ugu fiican
Kareemada ugu fiican ragga wareegooda madow